Sales Representative/Merchandising Manager Archives - Glory Assumption Space
Sales Representative/Merchandising Manager
Sales Staff –Female- (5)Posts /Salary-100,000 Kyats
မင်္ဂလာပါရှင်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Korea Cosmetics ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1. Sales Staff –Female- (5)Posts /Salary-100,000 Kyats/ Mayangone Township - ဆယ်တန်းသို့မဟုတ်ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ - အသက်ကန့်သတ်မထားပါ ။ - အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိူင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09-262223784 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ [caption id="attachment_1472" align="alignnone" width="424"] Young happy businesswoman talking on the phone and writing notes in office[/caption]
Sales Representative/Merchandising Manager -Female(5) posts
********************** URGENT REQUIREMENT ************************* မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Representative/Merchandising Manager -Female(5)posts/Salary-400000Ks/Dagon Township. -ဘွဲ့ရှိရမည်။ Sales & Marketing အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး(၅)နှစ်ရှိရမည်။ Way Planrများကောင်းစွာချမှတ် နိုင်ရမည်။ -မိမိလက်အောက်ရှိ sales Representative ၊ Merchandiser များအားကောင်းစွာညွှန်ကြားပြသပေးသူဖြစ်ရမည်။ -Computer ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းသွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )